Nhau - Musiyano pakati pekuoma-mhando nemafuta-akanyudzwa tranformer
Musiyano uripo pakati pekuoma-mhando uye mafuta-akanyudzwa tranformer
Musiyano mukuru pakati pemafuta-akanyudzwa transformer uye yakaoma-mhando transformer ndeyekuti hapana "mafuta", uye nekuti mafuta ari mvura, ane liquidity, oiri-inonyudzwa transformer inofanira kuva negoko, goko itransformer mafuta, mafuta anonyudzwa. mu-coil ye-transformer, coil ye-transformer haioneki kubva kunze; Uye yakaoma type transformer isina mafuta, hapana chikonzero chegoko, inogona kuona zvakananga iyo transformer coil; Chimwe chimiro ndechokuti mafuta-akanyudza transformer ane mutsago wemafuta pairi, uye mafuta ekushandura anochengetwa mukati, asi iye zvino mutsva wemafuta-akanyudza transformer haanawo piro yemafuta.
Ese emagetsi anoshandura ane iron cores yemagineti maseketi uye windings yemasekete. Uye musiyano mukuru uri mu "mafuta" uye "yakaoma". Izvi zvinoreva kuti, iyo miviri inotonhora inotonhorera yakasiyana, yekare ishanduro yemafuta (uye mamwe mafuta akadai se β mafuta, hongu) semhepo inotonhora uye yekudzivirira, iyo yekupedzisira imhepo kana mamwe magasi akadai seSF6 semhepo inotonhora. . Iyo transformer ndeyekuisa mutumbi wakaumbwa nesimbi core uye inotenderera mutangi yakazadzwa nemafuta ekushandura. Iyo iron core uye windings inowanzoputirwa ne epoxy resin. Iko kune zvakare ikozvino inoshandiswa yakawanda isina-encapsulated mhando, inomonereka neakakosha insulating bepa uye ipapo impregnated yakakosha insulating pendi, kudzivirira kumonereka kana simbi pakati nyoro.
Kuti tibatsire kupisa kupisa kwemafuta-akanyudzwa transformer, ndiko kuti, kufambisa kuyerera kwekupisa kwemafuta emukati anodzivirira, radiator inogadzirwa kunze, senge singi yekupisa, nepo transformer yakaoma haina radiator iyi, uye. kupisa kwekupisa kunoenderana nefani pasi peiyo transformer coil.
Oiri yakanyudzwa transformer nekuda kwekudiwa kwekudzivirira moto, kazhinji yakaiswa mune yakaparadzana transformer mukati kana kunze, uye yakaoma transformer inofanira kuiswa mukati meimba, kazhinji yakaiswa mukamuri yekugovera.
Panyaya yekubuda uye kushandiswa, ikozvino yakaoma transformer voltage giredhi ingori 35kV, uye huwandu hwacho hudiki kune oiri transformer, ingangoita 2500kVA. Uye nekuti iyo nzira yekugadzira yakaoma transformer yakaoma neiyo yakafanana voltage level uye kugona kweoiri transformer, mutengo wakakwira zvakare. Saka panguva ino kubva pakushandiswa kwemafuta kana kupfuura. Asi nekuda kwekuoma kwekuchengetedza kwezvakatipoteredza, murazvo unodzoreredza, kukanganisa kupikisa uye zvichingodaro zvakanakira, uye kazhinji inoshandiswa mune zvakakwirira zvinodiwa zvemukati magetsi ekupa uye nzvimbo dzekuparadzira, senge mahotera, zvivakwa zvehofisi, zvivakwa zvepamusoro-soro uye zvichingodaro.
Zvinogona kuonekwa kuti iyo yakaoma transformer uye mafuta transformer ine zvakanakira uye zvisingabatsiri. Iyo oiri inoshandura ine mutengo wakaderera uye nyore kugadzirisa, asi inopfuta uye inoputika. Nekuda kwekunaka kwayo kwemoto kuramba, iyo yakaoma transformer inogona kuiswa munzvimbo yekuremedza kuti ideredze kurasikirwa kwemagetsi uye kurasikirwa kwemagetsi. Asi mutengo wakaoma wakasiyana wakakwira, vhoriyamu yakakura, inodzivirira hunyoro uye inodzivirira guruva, uye ruzha rwakakura.
Nguva yekutumira: Aug-02-2021